नबिन पोखरेल| Corporate Nepal
बीमा समितिसँग टक्कर लिन खोज्दा बीमा संस्थानलाई धक्का, प्रशासक नै कमजोर
काठमाडौं । बीमा समितिसँग टक्कर लिन खोज्दा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको अवस्था खस्किँदै गएको छ । सरकारी स्वामित्व भएकै आधारमा समितिको नीति निर्देशन अटेर गर्दै आएको बीमा संस्थानको आर्थिक र व्यवस्थापकीय अवस्था दिनप्रतिदिन ख…
बीमा कम्पनीको व्यवस्थापन सम्हाल्न किन सक्दैनन् सीएहरु ? को हो जिम्मेवार ?
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) अध्ययन गरेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) को जागिर धमाधम संकटमा पर्न थालेको छ । यस्तो समस्या देखिन थालेसँगै बीमा क्षेत्रले किन सीए धान्न सकेन ? भन्ने प्रश्न उठन था…
बीमा संस्थानका प्रशासकको जागिर धरापमा, संस्थान पनि संकटउन्मुख
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान आर्थिकरुपमा सबल बन्दै जानुपर्नेमा झन कमजोर बन्दै गएको छ । प्रतिवद्धताअनुसार आफ्नो हिसाब किताब मिलाउन नसक्दा संस्थान संकटउन्मुख भएको हो । संस्थानको अवस्था …
सीईओ उपाध्यायको तिहार अनुभवः पट्का पटकाउने उट्पट्याङ कहिल्यै गरिन्, तास खेलिएन
काठमाडौं । तिहारलाई मान्ने, मनाउने र यो चार्डलाई हेर्ने सबैको आ–आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ । आज हामीले नेपाली बीमा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेरका एक अनुभवीको तिहार अनुभव प्रस्तुत गर्दैछौं । आफ्नो पेशागत…
कुन जीवन बीमा कम्पनी कति जोखिममा ? दायित्वको आधारमा सबैभन्दा जोखिममा नेपाल लाइफ
कात्तिक १७, २०७८ बुधबार
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुमा दायित्वका आधारमा सबैभन्दा जोखिममा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी देखिएको छ । विवरणअनुसार सबैभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने पूरानो कम्पनी नेपाल लाइफ सबैभन्दा बढी जोखिममा देखिएको हो ।&n…
समितिले नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागेको हल्ला मात्रै हो, कुनै सत्यता छैन्ः सिलवाल
काठमाडौं । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागेको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन् । कर्पोरेट नेपालको प्रश्नमा उनले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भन्ने कुरा आफैलाई थाहा नभए…
बीमा समितिले सेवा शुल्क महंगो लियोः बीमा कम्पनीहरू, महंगो भए कम्पनी बन्द गरः सिलवाल
काठमाडौं । भारतीय बीमा नियामकको तुलनामा नेपाली नियामक बीमा समितिले लिने सेवा शुल्क चर्को रहेको कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन् । अहिले बीमा समितिले कुनै पनि कम्पनीले गरेको कुल व्यवसायको एक प्रतिश…
एलआईसी नेपाललाई पुनर्बीमावापतको साढे सात करोड भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै नेपाल री
काठमाडौं । एलआईसी नेपालले आफ्नो पुनर्बीमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल री)मा गराउँदै आएको छ । तर नेपाल पुनर्बीमाले एलआईसीलाई तिर्नुपर्ने साढे सात करोड रूपियाँ भुक्तानी दिन लामो समयदेखि आलटा…
बोनस दर निर्धारणमा नेशनल लाइफ सबल, भन्छ– समितिमा बढेकै दर पठाउन सफल भयौं
काठमाडौं । फ्युचर बोनस प्रोभिजनले पूराना बीमा कम्पनीको बोनस दरमा प्रभाव पारिरहेको बेला नेशनल लाइफ इस्योरेन्स कम्पनीले भने आफ्नो सबलता कायम राखेको छ । कम्पनीले विगतकोभन्दा आफ्नो बोनस दर नघट्ने स्पष्ट पारेको छ ।&nbs…